Hesekiel 43 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
43 Afei ɔde me kɔɔ ɔpon a ɛkyerɛ apuei+ fam no ano. 2 Na mihui sɛ Israel Nyankopɔn anuonyam+ fi apuei+ fam reba, na ne nne te sɛ nsu bebree nne;+ n’anuonyam maa asase hyerɛnee.+ 3 Ná ɛte sɛ anisoade a mihui no,+ nea mihui bere a mebae sɛ merebɛsɛe kurow no,+ ne nea mihui wɔ Kebar+ asubɔnten ho a mede m’anim butuw fam no. 4 Na Yehowa anuonyam+ faa ɔpon a anim kyerɛ apuei fam no mu baa Fie hɔ.+ 5 Honhom no maa me so+ baa mfinimfini hɔ adiwo hɔ, na na Yehowa anuonyam ahyɛ Fie hɔ mã.+ 6 Na metee sɛ obi ne me rekasa fi Fie no mu,+ na ɔbarima no begyinaa me nkyɛn.+ 7 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Onipa ba, ɛha ne m’ahengua+ sibea ne m’anammɔn gyinabea,+ na mɛtena Israelfo mu akosi daa.+ Na Israel fie ne wɔn ahene+ remfa wɔn aguamammɔ ne wɔn ahene afunu+ ngu me din kronkron no ho fĩ bio.+ 8 Wɔde wɔn pon sii me pon ho na wɔde wɔn apongua sii m’apongua nkyɛn, na ɔfasu na na etwa me ne wɔn ntam.+ Wɔde abofonode a wɔyɛe no guu me din kronkron no ho fĩ,+ enti mede m’abufuw tɔree wɔn ase.+ 9 Afei ma wonyi wɔn aguamammɔ+ ne wɔn ahene afunu mfi me nkyɛn nkɔ akyirikyiri,+ na mɛtena wɔn mu akosi daa.+ 10 “Na wo onipa ba, ka Fie+ no ho asɛm kyerɛ Israel fie na wɔn ani nwu wɔn bɔne ho,+ na wɔnhwɛ ɔdan no nsusuwso na wonsusuw no saa. 11 Sɛ nea wɔayɛ no ma wɔn ani wu a, fa Fie no nsusuwso,+ ne ne nhyehyɛe, ne n’akwan a wɔde fi adi, ne n’akwan a wɔde ba mu, ne ne nsusuwso nyinaa, ne ne sibea ne ɔdan no nsusuwso nyinaa, ne ɛho mmara nyinaa kyerɛ wɔn, na kyerɛw wɔ wɔn anim, na wonhu ne nsusuwso ne ne sibea nyinaa, na wonni so.+ 12 Fie no ho mmara ni: Bepɔw no so ne ɛho asase nyinaa yɛ akronkronne mu ade kronkron.+ Hwɛ, Fie no ho mmara ni. 13 “Afɔremuka no nsusuwso wɔ basafa+ mu ni: Basafa biara, nsayam+ biako da so. Ase yɛ basafa biako. Ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa biako. Anoano a atwa ho ahyia no yɛ nsateakwaa akron. Eyi ne afɔremuka no ase. 14 Efi fam kosi mfomfamho a ɛwɔ ase no yɛ basafa abien, na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa biako. Efi mfomfamho ketewa no so kosi mfomfamho kɛse no so yɛ basafa anan, na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa biako. 15 Afɔremuka no so beae a wɔsɔ ogya no yɛ basafa anan, na mmɛn anan sisi afɔremuka no so.+ 16 Na beae a wɔsɔ ogya no ntwemu yɛ basafa dumien, na ne tɛtrɛtɛ nso yɛ basafa dumien,+ kyerɛ sɛ ɛyɛ ahinanan.+ 17 Na mfomfamho no ntwemu yɛ basafa dunan, na ne tɛtrɛtɛ nso yɛ basafa dunan, n’afã anan no nyinaa. Nea wɔde atoto ano ahyia no yɛ basafa fã, na ase yɛ basafa biako wɔ ho nyinaa. “N’atrapoe hwɛ apuei fam.” 18 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Onipa ba, nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Da a wɔbɛyɛ afɔremuka no ma wɔabɔ ɔhyew afɔre+ wɔ so na wɔde mogya+ apete so no, eyi ne ɛho ahyɛde.’ 19 “Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni: ‘Fa nantwinini kumaa biako ma Lewifo asɔfo+ a wɔyɛ Sadok+ asefo a wɔba m’anim+ bɛsom me no, na wɔmfa eyi mmɔ bɔne ho afɔre.+ 20 Na fa ne mogya no bi sosɔ mmɛn anan no ne mfomfamho no ntwea anan ne nea wɔde atoto ano ahyia no so, na dwira ho*+ na pata ma no.+ 21 Afei fa nantwinini kumaa a wɔde bɛbɔɔ bɔne ho afɔre no na kɔhyew no wɔ baabi a wɔapaw wɔ Fie hɔ, wɔ kronkronbea no akyi.+ 22 Na da a ɛto so abien no, fa ɔpapo a dɛm nni ne ho bɛbɔ bɔne ho afɔre, na wonnwira afɔremuka no ho sɛnea wɔde nantwinini kumaa no dwiraa ho no.’ 23 “‘Sɛ wudwira ho wie a, wode nantwinini kumaa a dɛm nni ne ho ne odwennini a dɛm nni ne ho bɛba. 24 Wode bɛba Yehowa anim, na asɔfo no de nkyene agugu so+ na wɔde abɔ ɔhyew afɔre ama Yehowa. 25 Wode ɔpapo bɛbɔ bɔne ho afɔre daa nnanson;+ na wɔde nantwinini kumaa ne odwennini a dɛm nni wɔn ho nso bɛbɔ afɔre. 26 Wɔbɛpata+ ama afɔremuka no nnanson, na wɔbɛtew ho ahyira so. 27 Sɛ wowie nna no nyinaa mu dwumadi a, da a ɛto so awotwe+ no rekɔ no, asɔfo no bɛbɔ ɔhyew afɔre ne asomdwoe afɔre ama mo; na m’ani begye mo ho,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.”